Turok: Dinosaur Hunter, inozivikanwa Nintendo 64 vhidhiyo mutambo unodzosera Linux | Linux Vakapindwa muropa
Kune vazhinji vanogadzira vanofunga nezveGnu / Linux chikuva kuti vatange mitambo yavo yevhidhiyo, asi kune vamwe vanogadzira avo vanoda kudzosa zvekare mitambo yemavhidhiyo yeGnu / Linux kuhupenyu. Tomb Raider uye Age Of Empires ndivo vaive vekutanga, asi havazi ivo voga.
Ichangobva kuburitswa shanduro yemutambo Turok: Dinosaur Hunter YeGnu / Linux. Mutambo unozivikanwa kwazvo kubva kuma 90s ekupedzisira ayo akaberekerwa iyo Nintendo 64 asi ikozvino yave kuwanikwa paGnu / Linux based operating system.
Kune avo vaisaziva Turok: Dinosaur Hunter, uye havana kuitamba, taura kuti ndizvo mutambo wekupfura unobatanidza zvakanakisa zveTomb Raider, Doom uye dinosaurs. Kwete, haisi remake yeJurassic Park asi chiitiko chinonakidza apo protagonist inofanirwa kuwana zvikamu zvakasiyana zvechigadzirwa chekare.
Kuti uwane zvikamu izvi, protagonist anofanirwa kuenda nenzira dzakasiyana dzemadinosaurs nezvikara zvinorwisa protagonist. Iyo nyowani vhezheni inochengetedza iyo nyaya, ivo protagonists uye kunyangwe iwo maficha, asi ese aine emahara tekinoroji, ndiko kuti, pane kugoverwa kweGnu / Linux. Iyo nyowani vhezheni inoda kuti isu tive nekombuta ine Intel i5 processor, 2 Gb yegondohwe uye kadhi yemifananidzo kubva kuNvidia kana Ati Radeon.
Tinogona kuwana Turok: Dinosaur Hunter kuburikidza webhu huru kubva kumugadziri kana kuburikidza neSteam. Chero zvazvingaitika, mutengo wemutambo hauna kunyanya kukwirira, saka tinogona kuuraya ma dinosaurs zvakare nemutengo mudiki kana, kana isu tanga tisingazive uyu mutambo, nakidzwa mutambo unozivikanwa weGnu / Linux.
Ichokwadi ndechekuti Turok: Dinosaur Hunter yaive yakakurumbira mutambo wevhidhiyo payakaburitswa, asi kubudirira kwayo kwanga kusiri kwakanyanya, muchokwadi, ini handirangarire chero akateedzana emangwana. Kunyangwe zvakadaro, zvinoongwa kuti mitambo yemavhidhiyo inosunungurwa yekuparadzirwa kweGnu / Linux, kunyanya kune vashandisi veDesktop. Ndinovimba hausi iwo mutambo wekupedzisira kuti uite iyi yekuvandudza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Turok: Dinosaur Hunter, inozivikanwa Nintendo 64 vhidhiyo mutambo unodzosera Linux
Turok 2, Turok 3 uye Turok Evolution yakabuda.
Uyu mushumo unotyisa, uyo waive usina sequels, unosemesa kumhan'ara uye chii chisina kuzivikanwa blogger